ကိုယျဝနျဆောငျစဉျ ဒီအသီးသုံးမြိုးကို ရှောငျနျော – Maythadin
May Thadin | January 4, 2021 | Celebrity, Knowledge | No Comments
ကိုယျဝနျဆောငျစဉျလုံးဝမစားသငျ့တဲ့ အသီး (၃) မြိုး ကိုယျဝနျဆောငျနစေဉျအခြိနျဟာ အမြိုးသမီးတဈယောကျရဲ့အနုနယျဆုံး အခြိနျကာလတဈခုလညျးဖွဈသလို သန်ဓသေားအတှကျလညျးအထူးဂရုစိုကျရမယျ့ ကာလဖွဈပါတယျကိုယျဝနျဆောငျနစေဉျမှာ အစအစအရာရာ သတိထားဆငျခွငျရမှာ ဖွဈတာကွောငျ့ စားလိုကျတဲ့ အစားအစာတိုငျးဟာလညျး အရမျးကိုအရေးကွီးပါတယျဒါကွောငျ့ ကိုယျဝနျဆောငျနစေဉျ လုံးဝမစားသငျ့တဲ့ အသီး (၃) မြိုးကို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ
(၁)သင်ျဘောသီးမမှညျ့သေးတဲ့ သင်ျဘောသီးအစိမျးကို ကိုယျဝနျဆောငျစဉျမှာ လုံးဝမစားသငျ့ပါဘူး။ တခြို့နိုငျငံတှဖွေဈတဲ့ သီရိလင်ျကာ၊ဘင်ျဂလားဒရှေျ့ နဲ့ အိန်ဒိယနိုငျငံတှမှောဆိုရငျ သင်ျဘောသီးကို ကိုယျဝနျဖကျြခတြဲ့အခါတှမှောအသုံးပွုကွတာဖွဈပါတယျ။
သင်ျဘောသီးအစိမျး၊ သင်ျဘောသီးထောငျးစတာတှကေို စားသုံးခွငျးက နုနယျသေးတဲ့ ကိုယျဝနျကို ပကျြကစြနေိုငျရုံသာမက ကိုယျဝနျမရတာမြိုးလညျး ဖွဈစနေိုငျပါတယျ။ဒါကွောငျ့ သင်ျဘောသီးအစိမျးကိုလုံးဝရှောငျရှားဖို့ အကွံပေးပါတယျ။ကိုယျဝနျ ၃ လကြျောလာပွီဆိုရငျတော့ (ကောငျးမှနျစှာ မှညျ့တဲ့)သင်ျဘောသီးမှညျ့ကို စားသုံးပေးနိုငျရုံသာမက အဲ့လိုစားသုံးပေးခွငျးဟာ သန်ဓသေားနဲ့မိခငျကို အထူးကနျြးမာစတေယျလို့ဆိုပါတယျ။
(၂) နာနတျသီး နာနတျသီးကိုလညျး ကိုယျဝနျဆောငျတှအေနနေဲ့ လုံးဝမစားသငျ့ပါဘူး။ နာနတျသီးဟာ bromelain ဓာတျကွှယျဝတာကွောငျ့ သားအိမျကို လြော့ရဲစတေဲ့အတှကျ လမစဘေဲ့ ကလေးမှေးတာမြိုးဖွဈတတျပါတယျ။တခြို့တှကေနာနတျသီးစားရငျကလေးမှေးဖှားရလှယျကူမယျလို့ထငျပွီး စားသုံးတတျကွပါတယျ။ တကယျတော့နာနတျသီးဟာ ကိုယျဝနျဆောငျနစေဉျ လုံးဝမစားသငျ့တဲ့အသီးဖွဈပါတယျ။
(၃) lစပဈြသီးတခြို့ဆေးပညာရှငျတှကေ ကိုယျဝနျဆောငျစဉျ စပဈြသီးကိုရှောငျရှားသငျ့တယျလို့ အကွံပေးထားပါတယျ။အကွောငျးကတော့စပဈြသီးကို အငျးဆကျပိုးမှားတှေ ကရြောကျခွငျးမှ ကာကှယျအောငျဆေးဖွနျးထားတတျလို့ပါ။
နောကျတဈခကျြက စပဈြသီးထဲမှာ resveratrol ပါဝငျမှု မွငျ့မားလှနျးတာကွောငျ့ အစာအဆိပျသငျ့တာမြိုးလညျးဖွဈစနေိုငျလို့ပါ။ဒါကွောငျ့ ကိုယျဝနျဆောငျစဉျ စပဈြသီးစားခငျြတယျဆိုရငျ ဆရာဝနျနဲ့ သသေခြောခြာ ဆှေးနှေးတိုငျပငျပွီးမှ စားသုံးသငျ့ပါတယျ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်လုံးဝမစားသင့်တဲ့ အသီး (၃) မျိုး ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်အချိန်ဟာ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့အနုနယ်ဆုံး အချိန်ကာလတစ်ခုလည်းဖြစ်သလို သန္ဓေသားအတွက်လည်းအထူးဂရုစိုက်ရမယ့် ကာလဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်မှာ အစအစအရာရာ သတိထားဆင်ခြင်ရမှာ ဖြစ်တာကြောင့် စားလိုက်တဲ့ အစားအစာတိုင်းဟာလည်း အရမ်းကိုအရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ် လုံးဝမစားသင့်တဲ့ အသီး(၃) မျိုးကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်
(၁) သင်္ဘောသီး မမှည့်သေးတဲ့ သင်္ဘောသီးအစိမ်းကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်မှာ လုံးဝမစားသင့်ပါဘူး။ တချို့နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ သီရိလင်္ကာ၊ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေမှာဆိုရင် သင်္ဘောသီးကိုကိုယ်ဝန်ဖျက်ချတဲ့အခါတွေမှာအသုံးပြုကြတာဖြစ်ပါတယ်။
သင်္ဘောသီးအစိမ်း၊သင်္ဘောသီးထောင်းစတာတွေကို စားသုံးခြင်းက နုနယ်သေးတဲ့ ကိုယ်ဝန်ကို ပျက်ကျစေနိုင်ရုံသာမက ကိုယ်ဝန်မရတာမျိုးလည်း ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့် သင်္ဘောသီးအစိမ်းကိုလုံးဝရှောင်ရှားဖို့ အကြံပေးပါတယ်။ကိုယ်ဝန် ၃ လကျော်လာပြီဆိုရင်တော့ (ကောင်းမွန်စွာ မှည့်တဲ့)သင်္ဘောသီးမှည့်ကို စားသုံးပေးနိုင်ရုံသာမက အဲ့လိုစားသုံးပေးခြင်းဟာ သန္ဓေသားနဲ့မိခင်ကို အထူးကျန်းမာစေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
(၂)နာနတ်သီး နာနတ်သီးကိုလည်း ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေအနေနဲ့ လုံးဝမစားသင့်ပါဘူး။ နာနတ်သီးဟာ bromelain ဓာတ်ကြွယ်ဝတာကြောင့် သားအိမ်ကို လျော့ရဲစေတဲ့အတွက် လမစေ့ဘဲ ကလေးမွေးတာမျိုး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။တချို့တွေကနာနတ်သီးစားရင် ကလေးမွေးဖွားရလွယ်ကူမယ်လို့ထင်ပြီးစားသုံးတတ်ကြပါတယ်။ တကယ်တော့ နာနတ်သီးဟာကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ် လုံးဝမစားသင့်တဲ့ အသီးဖြစ်ပါတယ်။
(၃) စပျစ်သီး တချို့ဆေးပညာရှင်တွေက ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် စပျစ်သီးကို ရှောင်ရှားသင့်တယ်လို့ အကြံပေးထားပါတယ်။အကြောင်းကတော့ စပျစ်သီးကို အင်းဆက်ပိုးမွှားတွေ ကျရောက်ခြင်းမှ ကာကွယ်အောင် ဆေးဖြန်းထားတတ်လို့ပါ။
နောက်တစ်ချက်ကစပျစ်သီးထဲမှာ resveratrol ပါဝင်မှု မြင့်မားလွန်းတာကြောင့် အစာအဆိပ်သင့်တာမျိုးလည်းဖြစ်စေနိုင်လို့ပါ။ ဒါကြောင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် စပျစ်သီးစားချင်တယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်နဲ့ သေသေချာချာ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးမှ စားသုံးသင့်ပါတယ်။
ခေတ်နဲ့အပြိုင်လှပနေဆဲဖြစ်ပြီး ညဝတ်အင်္ကျီလေးနဲ့ ရင်ဖိုစရာကောင်း​သော​ကောက်​​ကြောင်း​တွေနဲ့ အလှကြီးကိုလှနေတဲ့ မတ်​မတ်​ မြတ်ကေသီအောင်
ယာဉ်မ​တော်​တဆမှုဆိုးဆိုးဝါးဝါးဖြစ်ခဲ့လို့ လမ်းခွဲပေးဖို့ပြောလာတဲ့ချစ်ရသူကို မင်္ဂလာဝတ်စုံဝတ်ကာ အံ့သြဖွယ်​ရာတစ်​ခုကိုလုပ်​ခဲ့တဲ့ မိန်းက​လေးရဲ့ (ရုပ်​သံဖိုင်​)
?? ရတနာက ထက်ထက် မိုးဦး ကို ???? လွှင့် ဈေးရောင်းဖို့ မခေါ်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်း
ကမ္ဘာကျော် Kpop အဖွဲ့​တွေနဲ့အပြိုင် iTunes Top 100 K-Pop Songs မှာနေရာယူထားနိုင်​သော စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်နဲ့ Park Bom ရဲ့ Red Light သီချင်း (ရုပ်​သံ)